Kazakhstan : Hanavotra Ny Praiminisitra Ve Ny Fahana Tena Manorisory Ao Amin’ny Twitter-ny? · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan : Hanavotra Ny Praiminisitra Ve Ny Fahana Tena Manorisory Ao Amin'ny Twitter-ny?
Voadika ny 04 Jolay 2016 8:41 GMT
Massimov (ankavanana) miaraka amin'ny Praiminisitra Rosiana Dmitri Medvedev nandritra ny fotoana mahafinaritra tamin'ny 2012. Sarin'ny governemanta Rosiana nahazoana alàlana haparitaka. Nalaina teo anoloan'ny lapam-panjakàna tany Astana, Kazakhstan.
Tato ho ato, nanome harena ara-pitaovana hiasan'ireo mpanao gazety ny kaontin'ireo mpanao politika tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha.
Isan'ny misongadina indrindra amin'izany ny pejy instagram tena tsy nampoizina an'ny filoha Tsetsena, Ramzan Kadyrov, sy ny Twitter-n'ny Filoha Azeri, Ilham Aliyev, anjonoana an'i Armenia..
Fa ao Kazakhstan, ilay Repoblika mpanankarena solika any Azia Afovoany, dia mendrika omena haja ny twitter-n'ny Praiminisitra Karim Massimov izay vao nofahanana indray noho ny fanovàna tampoka ny hevi-diso manorisory tao amin'ny bitsika nataony.
Ireto ambany ireto misy hafatra maika efatra nataon'i Masimmov milaza ny zava-nisy marina teo anelanelan'ny fiborosiany nify ny maraina sy ny fandehanany hatory ny alina :
— Karim Massimov (@KarimMassimov_E) June 17, 2016
Nankatoavin'ny parlemanta ny tatitry ny tetibolanay tamin'ny taona 2015. Namaly ny fanontaniana rehetra & nampitaha ny fitànanay an-tsoratra izahay
— Karim Massimov (@KarimMassimov_E) June 20, 2016
Nitarika ny fivorian'ny komisiona momba ny tetibola. Manomboka ny fanomanana ny drafitra ho an'ny tetibola 2017.
Nampanao fivoriana mikasika ny lalàna vaovao momba ny tetibola aho.
— Karim Massimov (@KarimMassimov_E) June 21, 2016
Nandray anjara tamin'ny fivorian'ny Biraon'ny Antoko Nur Otan
Miady mba ho velona
Tsy misy na dia iray aza amin'ireo bitsika tsy noraharahaina nihanaka ireo mitantara ilay lehilahy miady ho an'ny fiainany ara-politika, ary i Massimov no fantatra tsara fa iray amin'ireo mpiara-miasa mahatoky ny Filoha Nursultan Nazarbayev, 75 taona .
Nefa raha inoana ny iray amin'ireo mpandalina politika sangany ao Kazaksatan, dia ny fiverenan'i Massimov amin'ny haino aman-jery sosialy no taratra mivantan'ny adim-pahefana fara-tampony ara-politika any amin'ilay fanjakana ao Asia Afovoany.
Izao no nosoratan'i Dosym Satpayev tao amin'ny tsangànan-dahatsoratra vao haingan'ny Forbes.kz :
Tsy afenina fa raharaha goavana ny ady ho eo amin'ny toeran'ny Piraiminisitra. Ny fijanonan'i Massimov maharitra eo amin'io toerana io dia azo hazavaina amin'ny hoe noheverin'ny [ fitondràna Nursultan Nazarbayev] ho mpitantana mahomby izy nandritra ny fotoanan'ny krizy izay nahatonga ny famaritana an'i Kazakhstan […] Fa amin'izay lafiny izay, na dia izany aza, dia ifandritahana izay mety ho toetoetry ny praiministra. Nisy torohay fanoherana ambongadiny ny Praiminisitra natombok'ireo solombavam-bahoaka mpiova hevitra foana sy ireo mpikambana amin'ireo vondron'ny mpitantana vitsy an'isa sy ny rafitry ny haino aman-jery isankarazany.
mbola notohizan'i Satpayev :
Nisy ny fotoana izay nandaozan'i Massimov ny tontolon'ny fampahalalam-baovao, mba tsy hahafahan'ireo mpanohitra azy milaza fa izy no “masoandro faharoa eny an-danitra”. Tsapan'ny Praiminisitra fa zava-doza kokoa ny mangina amin'izao fotoana izao. Tonga izao ny fotoana hanaovana hetsika, isan'izany ny eo imason'ny filoha izay fantatra tsara fa tsy faly amin'ny toe-draharaha ara-politika sy ara-toe-karena amin'izao fotoana izao. Indrindra fa efa nolazain'ny filoha tamin'ny fiandohan'ny volana May fa ” tsy maintsy miteny amin'ny olona, manazava ny toerany ny mpanao politika, mba ahazoana ny fitokisan'ny fiarahamonina”.
Io fomba fijery ny tsindry ara-politika manery ny fidiran'i Massimov indray ao amin'ny fifanjevoan'ny haino aman-jery sosialy io ihany koa no nozarain'i Asemgul Kassenova, mpanao gazetin'ny iray amin'ireo tranonkalam-baovao vitsy tsy miankina ao amin'ny firenena,Tengris News, izay nisy fotoana nilazàna fa an'ny Massimov izy tenany :
— Асемгуль Касенова (@AsemgulKasenova) June 21, 2016
Araka izany, niverina amin'ny Twitter indray i Massimov ary mananihany ny fivorian'ny governemanta. Ahem, ahem. Tena tofok'ireo zavatra tsy misy dikany sy ny lalaon'ny seza fiandrianana izahay :-/
Mba ho azo antoka tsara, dia lavitr'ilay tantara mitohy HBO mampihorin-koditra ivavahana tsy an-kiato jeren'ny olona efa ho an-tapitrisany manerantany ny Twitter-n'i Massimov, fa mety ho ny politika Kazakh manontolo no tsy ao.
Noho ny fitsitokotokoana sy ny kolikoly, dia azon'ahiahy tampoka ireo sangany amin'ny politikam-pirenena any Kazakhstan, ahiahy mifàka lalina ao anatin'ny taonan'ilay mpitondra naharitra elabe, Nursultan Nazarbayev, miampy ny krizy ara-toekarena vatsian'ny fikorontanan'ny ao Rosia sy ny fitontongan'ny vidin'ny solika erantany.
Vao haingana no nisehoan'izany tamin'ny fisamborana ireo olona ambony maromaro sy ny fitsaràna ireo mpiasam-panjakana ambony ary ireo mpanelanelana ny fitondràna amin'ny raharaha ara-barotra izay mpiara-miasa amin'i Dariga, zanaka vavin'i Nazarbayeva, naka ny toeran'ny Praiminisitra lefitra tamin'ny taona lasa.
Mety hidika ho adisaina ho an'i Massimov, mpanompo nahatoky ela, mpitantana malala-tsaina sy manan-tsaina izany, fa angamba tsy hanana ny tambajotram-panohanana lalim-paka ilaina entina hiadiana amin'ny fanafihana atao amin'ny sezany ilay iray izay toy ny foko vitsy an'isa*
Raha voatendry handeha ny filohan'ny governemantan'i Kazakhstan, dia hanantena fa tsy hiverina hanaloka azy intsony ity bitsika noforoniny avy tamin'ny kaonty Twitter-ny voalohany tamin'ny 2012 ity.
I’m off to Karaganda.
— Karim Massimov (@KarimMassimov_E) January 20, 2012
Hanainga ho any Karaganda aho
* Matetika no lazain'ny Kazakhstanis fa avy amin'ny foko Uighur i Massimov na dia tsy mbola nilaza izany aza izy. Latsaky ny 2%-n'ny mponina ao amin'ny firenena ny foko Uighurs.